Semalt: Ahoana no fomba hifidianana ny SEO?
Manao ny orinasa tsara indrindra hanatanteraka asa SEO ho an'ny tranonkalaMety ho sarotra ny votoatiny. Misy orinasa marobe izay mampanantena fa hanao zavatra be dia be, nefa tsy manome antoka ireo fampanantenana ireo hamonjena anao
Raha mila Search Engine Optimization amin'ny tranokalanao naNy votoatiny dia mety mila manakarama manam-pahaizana manokana hanampiana anao hanatontosa asa isan-karazany, mety tsy ho mora. Amin'ny tranga hafa dia azonao ataoManaova fanapahan-kevitra ratsy rehefa misafidy orinasa SEO hanao ny asanao - fotografia analogica abertura.
Nik Chaykovskiy, tompon'andraikitra manam-pahaizana Semalt Dieny Digital dia manazava ireo fepetra tokony harahinao rehefa misafidy ny masoivoho SEO.
Mpitsara amin'ny fijerena ny tranokala
Ny iray amin'ireo fomba marina hanombantombanana ny halalin'ny fahaizanaNy orinasa dia mijery ny tranonkala. Raha toa ny orinasa SEO dia mampanantena valiny tena tsara, mety ho hitan'izy ireo ao amin'ny tranonkalany. Ny tranonkala dia tokonymampiseho ny traikefa, ny ambaratongan'ny famonoana teknika sy ny fampiasana ny teknolojia SEO.
Manombantombana ny fahaizan'ny orinasa
Ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy midika foana hoe manao ny azy ireoSEO tsara kokoa noho ireo orinasa madinika manana mpiasa vitsivitsy. Fahendrena ny mandinika fijery hafa manan-danja izay hanome anao nyhevitra momba ny fahombiazan'ny orinasa mafy orina..
Jereo hafa amin'ny valin'ny fikarohana
Ny fiheverana fa ny vokatra ambony indrindra dia manadihady ny fizotry ny fikarohanadia omena an'ireo orinasa tena ilainao. Ny algorithm fampiasa finday dia mampiasa antony maro samihafa amin'ny fizarana ny fikarohana. Noho izany,Tsy ny orinasa avo lenta rehetra no manome ny tolotra ilainao.
Manapaha hevitra ny singa SEO izay ilainao
Farito ny endriky ny SEO izay mitaky fanatsarana. SEOmitaky asa maro. Ohatra, ny fanesorana ny rohy, ny fitantanana reputation, ny fananganana rohy, ny retargeting, ny PPC, ny marketing,SEO fanaraha-maso, SEO, sy ny sisa. Tapa-kevitra ny sehatra tokony hifantohanao sy hahita ny mafy orina izay manana laza tsara indrindra amin'ny fiatrehana azy ireo.
Miresaha amin'ny manam-pahaizana maro
Betsaka ny orinasan'ny orinasam-pifandraisana SEO dia miezaka ny hampiaiky volanampividy iray miresaka amin'ny orinasa marobe izay mety hahasoa ny fikatsahana fikarohana. Ny fifanampiana amin'ireo orinasa ireo dia afaka manampy anaomba hahazoana fijoroana vavolombelona marina sy fandaharam-pianarana azonao atao.
Fantaro ireo tantara
Rehefa mitady ny orinasa SEO tsara indrindra, dia zava-dehibe nyHenoy ny tantara izay tiany hizarana. Ny orinasa SEO tsara dia miady amin'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny tetikasan-kery. Ny fizarana tantara dia irayny fomba fiasa mampiavaka ny tetikasa izay manampy ny mpanjifa vaovao hamorona sarin-tsarin'ny vondron'orinasa SEO syfahaiza-manao. Rehefa avy nianatra ny fahombiazan'ny mpanjifa ianao, dia afaka mandinika io haiady io ho mpiara-miasa.
Manana tanjona mazava, mifanakalo hevitra amin'ny orinasa maro, mandinikaNy hoavin'ny ho avin'ny ho avy, ary ny fihainoana tantara sasany avy amin'ny SEO manampahaizana dia afaka manampy anao hahita ny ekipan'ny SEO. Diniho ny karazanyary hianatra bebe kokoa momba izany Ireo tolotra SEO mety ilainao.